သူရငျဆိုငျခဲ့ဖူးတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူး အမညျတှကေို ပွောကွားလိုကျတဲ့ ယူနိုကျတကျ ခံစဈကစားသမားဟောငျး #ဗီဒဈ - SPORTS MYANMAR
သူရငျဆိုငျခဲ့ဖူးတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူး အမညျတှကေို ပွောကွားလိုကျတဲ့ ယူနိုကျတကျ ခံစဈကစားသမားဟောငျး #ဗီဒဈ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ ဗဟို ခံစဈ ကစားသမားဟောငျး ဖွဈသူ နီမနျဂြာ ဗီဒဈ ဟာ အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မှာ ရှိနေ ခဲ့တဲ့ 8 နှဈတာ အခြိနျ ကာလ အတှငျး ပရီးမီးယား လိဂျ ပွိုငျပှဲ မှာ တိုကျစဈ ကစားသမား ကောငျးတှေ မြားစှာ ကို ပွိုငျဖကျ အဖွဈ ရငျဆိုငျ ကစား ခဲ့ဖူး ပါတယျ ။
ဗီဒဈဟာ ယူနိုကျတကျ မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ အခြိနျ ကာလ အတှငျး ကွိုးကွာနီ တို့ရဲ့ တိုကျစဈမှူး ဟောငျး ဖွဈသူ ဖာနနျဒို တောရကျဈ ရဲ့ ဒုက်ခ ပေးမှု တှကေို မြားစှာ ခံထား ခဲ့ ရဖူး ပမေယျ့ သူ ရငျဆိုငျ ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယား လိဂျရဲ့ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူး စာရငျး မှာတော့ ဗီဒဈ ဟာ စပိနျ လကျရှေးစငျ ကို ထူးထူးခွားခွား ခနျြလှပျ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ အစား သူဟာ တောရကျဈ ရဲ့ လီဗာပူး အသငျး ဖျောဟောငျး ဖွဈသူ ပီတာ ခရော့ချြ ကို ရငျဆိုငျ ရ ခကျခဲ လှတဲ့ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူး တဈဦး အဖွဈ ဦးစား ပေးပွီး ရှေးခယျြ သှားခဲ့ လိုကျပွီး ခရော့ချြ ဟာ သူ့ကို ခကျခဲ မှုတှေ စတငျ ပေးနိုငျ ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမား ဖွဈကွောငျး ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
” ကြှနျတေျာ့ ရဲ့ ပထမဆုံး အတှေ့ အကွုံ ကတော့ ပီတာ ခရော့ချြ နဲ့ စတငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီ မတိုငျခငျ တုနျးက ကြှနျတျော ဟာ2မီတာ လောကျ အထိ အရပျ ရှညျတဲ့ ပွိုငျဖကျ တိုကျစဈ ကစား သမား မြိုး မမွငျ တှခေဲ့ ဖူး ပါဘူး ”
” အဲ့ဒီ တုနျးက သူဟာ လီဗာပူး အသငျး အတှကျ ကစား ပေးနေ ခဲ့ပွီး ကြှနျတျော တို့ အနျဖီးလျ မှာ လိဂျ ဖလား ပှဲစဉျ တဈပှဲ သှားရောကျ ကစား ခဲ့ ကွတဲ့ အခြိနျ ပေါ့ ။ သူ့ကို ကွညျ့ပွီး ကြှနျတျော စိတျထဲ မှာတော့ ‘ ဝိုး ၊ ဒီ ကောငျကွီး နဲ့ ငါ ဒီနေ ဘယျလို ကစား ရ မလဲ ? ‘ ဆိုပွီး တှေးတော နခေဲ့ ပါတယျ ”
” အဲ့ဒီနောကျ ကြှနျတျော ဟာ ဘယျလာမီ နဲ့ ရငျဆိုငျ ကစား ခဲ့ရ ပါတယျ ။ သူဟာ ဘောလုံး ကိုငျ ကစား တာ ကောငျးလှနျး တဲ့ ကစားသမား တဈဦး တော့ မဟုတျ ပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ သူ အရမျး မွနျ ပါတယျ ။ သူဟာ နရော လှတျတှေ ဆီ လြှကျတပွတျ ပွေးလှား ဝငျရောကျ နိုငျ သလို ခရော့ချြ ဟာ လထေဲ က ဘောလုံး တိုငျးကို ဦးယူ နိုငျ ပါတယျ ။ ကြှနျတျော အရငျ တုနျးက ဒီလို ပွိုငျဖကျ မြိုး မတှေ့ မွငျခဲ့ ဖူး ပါဘူး ”
” သူနဲ့ ရငျဆိုငျ ပွီးတော့ နောကျပိုငျး ကြှနျတျော ဟာ သူ့လောကျ မွနျတဲ့ ၊ ဉာဏျကောငျး လှတဲ့ နံပါတျ9ကစားသမား မတှေ့ ခဲ့ရ ပါဘူး ။ သူတို့ တဈဦးခငျြး စီကို ဘယျလို ရငျဆိုငျ ရ မလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျော သိ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ နှဈယောကျ လုံးကို တဈပွိုငျ တညျး ဘယျလို ရငျဆိုငျ ကစား ရ မလဲ ဆိုတာ တော့ ကြှနျတျော လညျး မသိ ပါဘူး ”
” အဲ့ဒီ တုနျးက ကြှနျတျော ဟာ အသငျး ရဲ့ ခံစဈ မှာ အသငျး ဖျော ဝကျဈ ဘရောငျး နဲ့ အတူ ပူးတှဲ ကစား ခဲ့ရ ပါတယျ ။ တဈကယျ့ ကို ခကျခဲ ပွီး ပှဲခြိနျ ကွာတဲ့ ပှဲ တဈခု လို့ ကြှနျတျော ခံစား ခဲ့ရ သလို ကြှနျတျော တို့ 1 –0နဲ့ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့ရ ပါတယျ ” လို့ ဗီဒဈ က ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ ဗီဒဈ ဟာ ပွိုငျဖကျ ကစားသမား တှေ အဖွဈ ရငျဆိုငျ ကစား ခဲ့ ရတဲ့ ခြဲလျဆီး တိုကျစဈ မှူးဟောငျး ဒရော့ဂျဘာ ၊ မနျစီးတီး တိုကျစဈမှူး ဟောငျး အဂူရို နဲ့ လီဗာပူး တိုကျစဈ မှူးဟောငျး လူးဝဈ ဆှာရကျဇျ တို့ကို ဆကျလကျ ခြီးကြူး စကား ဆိုသှား ခဲ့လိုကျ ပါတယျ ။
သူဟာ ခြဲလျဆီး အသငျး ရဲ့ ဂန်ဓဝငျ တိုကျစဈမှူး ဟောငျး ဖွဈတဲ့ ဒီဒီယာ ဒရော့ဂျဘာ ကို ဉာဏျကောငျး လှနျးသူ ၊ ပွိုငျဖကျ ခံစဈ ကစား သမား တှေ ဘာကို တှေးတော နကွေ သလဲ ဆိုတာ ကို ထှငျးဖောကျ သိမွငျ နိုငျသူ လို့ အထူး ခြီးကြူး သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ အဂူရို နဲ့ ပတျသကျ လို့ 2013 တုနျးက မနျစီးတီး ကို4– 1 ဆိုတဲ့ ရလဒျ နဲ့ ရှူံးနိမျ့ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ ဟာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အဆိုးရှားဆုံး ပှဲစဉျ ဖွဈခဲ့ ကွောငျး ၊ ဆှာရကျဇျ ဟာ ဂိုးသှငျး ကောငျးတဲ့ ပငျကိုယျ စရိုကျ လက်ခဏာ ရှိသူ ဖွဈပွီး ပွိုငျဖကျ ကို အငျတိုကျ အားတိုကျ ထိုးဖောကျ ကစား နိုငျသူ ဖွဈကွောငျး ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
သူရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူး အမည်တွေကို ပြောကြားလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် ခံစစ်ကစားသမားဟောင်း #ဗီဒစ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဗဟို ခံစစ် ကစားသမားဟောင်း ဖြစ်သူ နီမန်ဂျာ ဗီဒစ် ဟာ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာ ရှိနေ ခဲ့တဲ့ 8 နှစ်တာ အချိန် ကာလ အတွင်း ပရီးမီးယား လိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှာ တိုက်စစ် ကစားသမား ကောင်းတွေ များစွာ ကို ပြိုင်ဖက် အဖြစ် ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ဖူး ပါတယ် ။
ဗီဒစ်ဟာ ယူနိုက်တက် မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ အချိန် ကာလ အတွင်း ကြိုးကြာနီ တို့ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း ဖြစ်သူ ဖာနန်ဒို တောရက်စ် ရဲ့ ဒုက္ခ ပေးမှု တွေကို များစွာ ခံထား ခဲ့ ရဖူး ပေမယ့် သူ ရင်ဆိုင် ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယား လိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူး စာရင်း မှာတော့ ဗီဒစ် ဟာ စပိန် လက်ရွေးစင် ကို ထူးထူးခြားခြား ချန်လှပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ အစား သူဟာ တောရက်စ် ရဲ့ လီဗာပူး အသင်း ဖော်ဟောင်း ဖြစ်သူ ပီတာ ခရော့ခ်ျ ကို ရင်ဆိုင် ရ ခက်ခဲ လှတဲ့ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦး အဖြစ် ဦးစား ပေးပြီး ရွေးချယ် သွားခဲ့ လိုက်ပြီး ခရော့ခ်ျ ဟာ သူ့ကို ခက်ခဲ မှုတွေ စတင် ပေးနိုင် ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
” ကျွန်တော့် ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့ အကြုံ ကတော့ ပီတာ ခရော့ခ်ျ နဲ့ စတင် ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ မတိုင်ခင် တုန်းက ကျွန်တော် ဟာ2မီတာ လောက် အထိ အရပ် ရှည်တဲ့ ပြိုင်ဖက် တိုက်စစ် ကစား သမား မျိုး မမြင် တွေ့ခဲ့ ဖူး ပါဘူး ”
” အဲ့ဒီ တုန်းက သူဟာ လီဗာပူး အသင်း အတွက် ကစား ပေးနေ ခဲ့ပြီး ကျွန်တော် တို့ အန်ဖီးလ် မှာ လိဂ် ဖလား ပွဲစဉ် တစ်ပွဲ သွားရောက် ကစား ခဲ့ ကြတဲ့ အချိန် ပေါ့ ။ သူ့ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် စိတ်ထဲ မှာတော့ ‘ ဝိုး ၊ ဒီ ကောင်ကြီး နဲ့ ငါ ဒီနေ ဘယ်လို ကစား ရ မလဲ ? ‘ ဆိုပြီး တွေးတော နေခဲ့ ပါတယ် ”
” အဲ့ဒီနောက် ကျွန်တော် ဟာ ဘယ်လာမီ နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ရ ပါတယ် ။ သူဟာ ဘောလုံး ကိုင် ကစား တာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး တော့ မဟုတ် ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူ အရမ်း မြန် ပါတယ် ။ သူဟာ နေရာ လွတ်တွေ ဆီ လျှက်တပြတ် ပြေးလွှား ဝင်ရောက် နိုင် သလို ခရော့ခ်ျ ဟာ လေထဲ က ဘောလုံး တိုင်းကို ဦးယူ နိုင် ပါတယ် ။ ကျွန်တော် အရင် တုန်းက ဒီလို ပြိုင်ဖက် မျိုး မတွေ့ မြင်ခဲ့ ဖူး ပါဘူး ”
” သူနဲ့ ရင်ဆိုင် ပြီးတော့ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ဟာ သူ့လောက် မြန်တဲ့ ၊ ဥာဏ်ကောင်း လှတဲ့ နံပါတ်9ကစားသမား မတွေ့ ခဲ့ရ ပါဘူး ။ သူတို့ တစ်ဦးချင်း စီကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ရ မလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် သိ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ နှစ်ယောက် လုံးကို တစ်ပြိုင် တည်း ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ကစား ရ မလဲ ဆိုတာ တော့ ကျွန်တော် လည်း မသိ ပါဘူး ”
” အဲ့ဒီ တုန်းက ကျွန်တော် ဟာ အသင်း ရဲ့ ခံစစ် မှာ အသင်း ဖော် ဝက်စ် ဘရောင်း နဲ့ အတူ ပူးတွဲ ကစား ခဲ့ရ ပါတယ် ။ တစ်ကယ့် ကို ခက်ခဲ ပြီး ပွဲချိန် ကြာတဲ့ ပွဲ တစ်ခု လို့ ကျွန်တော် ခံစား ခဲ့ရ သလို ကျွန်တော် တို့ 1 –0နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရ ပါတယ် ” လို့ ဗီဒစ် က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ဗီဒစ် ဟာ ပြိုင်ဖက် ကစားသမား တွေ အဖြစ် ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ ရတဲ့ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ် မှူးဟောင်း ဒရော့ဂ်ဘာ ၊ မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း အဂူရို နဲ့ လီဗာပူး တိုက်စစ် မှူးဟောင်း လူးဝစ် ဆွာရက်ဇ် တို့ကို ဆက်လက် ချီးကျူး စကား ဆိုသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
သူဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ဒီဒီယာ ဒရော့ဂ်ဘာ ကို ဥာဏ်ကောင်း လွန်းသူ ၊ ပြိုင်ဖက် ခံစစ် ကစား သမား တွေ ဘာကို တွေးတော နေကြ သလဲ ဆိုတာ ကို ထွင်းဖောက် သိမြင် နိုင်သူ လို့ အထူး ချီးကျူး သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အဂူရို နဲ့ ပတ်သက် လို့ 2013 တုန်းက မန်စီးတီး ကို4– 1 ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ရှူံးနိမ့် ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ဟာ ယူနိုက်တက် အတွက် အဆိုးရွားဆုံး ပွဲစဉ် ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း ၊ ဆွာရက်ဇ် ဟာ ဂိုးသွင်း ကောင်းတဲ့ ပင်ကိုယ် စရိုက် လက္ခဏာ ရှိသူ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဖက် ကို အင်တိုက် အားတိုက် ထိုးဖောက် ကစား နိုင်သူ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။